အဆိုပါ chatroulette မှအသုံးပြုသူများကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင့် site မှာ add!
Flirtymania တစ်ဦးအပြန်အလှန် video chat ဖြစ်ပါသည်
ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် streaming များအားဖြင့်ဝင်ငွေလိုသူမိန်းကလေးများဖိတ်ခေါ်ပါ။ အကြောင်းအရာ, လေလံနဲ့မေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆျောမှု - ကျနော်တို့တိုင်းခဲကနေအမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
Flirtymania ကို PC နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုအပေါ် browser များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ အသုံးပြုမှုကိုသင်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်ချင်ကိုမဆိုအသွားအလာအမျိုးအစား။
$ 200 ကနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video chat အတွက်အခမဲ့စီးအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်ခေတ်အစားဆုံးအကြောင်းအရာသာငွေပေးချေပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့ Affiliate အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လုပ်တိုင်းဝယ်ယူရာမှဝင်ငွေ။ သင်တို့ကိုလည်း Affiliate wembasters နှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ပေးချေရပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Affiliate link ကိုဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ဝင်ငွေကိုစတင်ရန်သင့် site သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video chat တွေကို embed ။
Affiliate အသုံးပြုသူများသည် '' ငွေပေးချေမှု, အချိန်မကန့်သတ်ခြင်းမှ
Affiliate ထုတ်လွှင့် 'နှင့်ကွန်ရက်ထိန်းသိမ်းသူများ' 'ဆုကြေးငွေကနေ
ကျနော်တို့ဒေါ်လာအတွက် service ၏စျေးနှုန်းအနေဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းကဒင်္ဂါးပြားမှဖလှယ်လောကအတွက်။ = 6000 ဒင်္ဂါးပြား $ 1 ။
, ePayments မှာပိုက်ဆံမှတ်ပုံတင်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တစ်ဦး Bitcoin သို့မဟုတ် Yandex ပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးငွေပေးချေမှုသင်အလိုရှိသည့်အချိန်တွင်မဆိုလက်ခံရရှိရန်။
သင်၏ video chat တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ဈေးကွက်မှာမြှင့်တင်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံများတွင်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ဒီ app အရှေ့အလယ်ပိုင်းသူတွေကိုအပါအဝင်အားလုံးလူကြိုက်များဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, စပိန်, ခကျြ, ရုရှ, တူရကီ, ဂျပန်, ဟီဘရူး, အာရ။
ကို receiver ရဲ့ဘာသာစကားသို့မက်ဆေ့ခ်ျ Autotranslating နားလည်မှုမပြဿနာများနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှအသွားအလာပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာ site ကိုစတင်ရန်
သင်သည်သင်၏ site ကိုသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video chat ကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ခြစ်ရာကနေဖနျတီးနိုငျ; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုအပ်မျှမကသာသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအသက်အရွယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရှေးခယျြ: 12+, 14+, 16+ သို့မဟုတ် 18+ ။
Flirtymania ကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်မဆိုကို browser တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကာသပ္ပါယ်သောဗီဒီယိုချက်တင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောကမ်းလှမ်းမှုကြိုးစားရန်အကြိမ်ကြိမ်ကွန်ပျူတာများ, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များအနေဖြင့်ယာဉ်ကြောရောမွှေပါ။
Google Analytics သည်ဆက်သွယ်မှု
စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်ဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်ရရှိရန်လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုစာမျက်နှာများတွင် Google Analytics မှတန်ပြန်ထည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုမှကြေငြာများနှင့်လင့်များ post ရသောဆိုဒ်များ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်အတူပူးပေါင်း။ ကျနော်တို့တောင်မှသွက်နှင့်တက်ကြွသောပရိသတျနဲ့အသေးအရင်းအမြစ်တို့အတွက်အမြတ်အစွန်းအသုံးအနှုန်းများပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူဖွင့်ဖို့သင်တို့အဘို့အားလုံးအထူးနှုန်းများပစ္စည်းများပြင်ဆင်ကြပြီ။ အခုတော့သူတို့ကိုသင်ကိုယ်သင်ဖန်တီးရန်အချိန်ဖြုန်းရန်မလိုပါ။ သင်လိုအပ်အထုပ်ကို Download လုပ်ပါနှင့်မြှင့်တင်ရန် start!
အဘယ်သူသည် Affiliate Program ကို join နိုင်မလဲ?
မည်သူမဆို! သင်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုသို့မဟုတ်အထူးအကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ရုံသင့်လျော်သောအပိုင်းများတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလင့်များနှင့် codes တွေကိုလက်ခံရရှိသည်။
သာသင်တို့အပေါ်မှာမူတည်! အားလုံးမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများသုံးပါ - က်ဘ်ဆိုက်များ, ကြော်ငြာတွေ, ဖိုရမ်များနှင့်လူမှုရေးပိုက်ကွန်ကနေတစ်ဆင့်သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုမြှင့်တင်ရန်။
အများအားဖြင့်တောင်းဆိုမှု 1-2 ရက်အတွင်းန်းကျင်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုထက်5ရက်အတွင်းသည်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။